တရုတ် GMP FDA အရည် - အိပ်ရာဂျက်စက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Qiangdi
ဂျက်ကြိတ်စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံပုံဆွဲခြင်း - Classifier ဘီး၏ centrifugal force နှင့် centripetal force ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ပစ္စည်းသည်ဂျက်စက်၏အတွင်းပိုင်းတွင်အရည် - အိပ်ရာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမှုန့်မှုန့်များရရှိသည်။
အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းသည်ကြိတ်ခွဲထားသောလေထုအဖြစ်ဖိအားပေးသည့်လေနှင့်အတူ fluidized အိပ်ရာ pulverizer ။ ကြိတ်ခွဲစက်၏ကိုယ်ထည်ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲခြားထားသည်။ ယင်းတို့မှာကြိတ်ခွဲခြင်းtransmissionရိယာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးareaရိယာနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းareaရိယာဖြစ်သည်။ Grading Area အား grading ဘီးနှင့်တပ်ဆင်ထားပြီးအမြန်နှုန်းကို converter မှချိန်ညှိနိုင်သည်။ ကြိတ်ခွဲခန်းတွင်ကြိတ်ခွဲနိုင်သည့် nozzle၊ feeder စသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ ကြိတ်ခွဲသေတ္တာ၏အပြင်ဘက်ရှိ ring sir supply disc သည်ကြိတ်ခွဲသော nozzle နှင့်ဆက်စပ်နေသည်
အဆိုပါပစ္စည်းပစ္စည်းလမ်းခွဲမှတဆင့်ကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ဝင်။ အထူးတပ်ဆင်ထားသောကြိတ်ခွဲထားသောနင့်ပေါက်လေးခုမှတဆင့်ဖိအားပေးသောလေထဲသို့ဖိအားပေးသည့်လေထဲသို့ဖိအားပေးသောလေသည်။ အဆိုပါပစ္စည်းသည် ultrasonic jetting စီးဆင်းမှုအတွက်အရှိန်ရရှိသည်နှင့်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသည်အထိနှိပ်စက်ခြင်းအခန်း၏ဗဟိုဆုံမှတ်မှာထပ်ခါတလဲလဲသက်ရောက်မှုနှင့်တိုက်မိ။ ကြိတ်ခွဲထားသောပစ္စည်းသည်အဆင့်အတန်းနှင့်အတူအဆင့်အတန်းသို့ဝင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဆင့်မြင့်ဘီးများသည်အမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်နေသောကြောင့်၊ ပစ္စည်းတက်သောအခါ၊ အမှုန်များသည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော rotors များမှဖန်တီးသော centrifugal force နှင့် airflow ၏ viscosity မှဖန်တီးသည့် centripetal force အောက်တွင်ရှိသည်။ အမှုန်များသည် centripetal force ထက်ပိုကြီးသည့် centrifugal force အောက်ရောက်သောအခါလိုအပ်သော gradating အမှုန်များထက်ပိုမိုကြီးမားသောအချင်းနှင့်အတူကြမ်းအမှုန်များသည် grading wheel ၏အတွင်းခန်းထဲသို့မ ၀ င်ဘဲနှိပ်စက်ခံရမည့်နှိပ်စက်ခံရသည့်အခန်းသို့ပြန်သွားလိမ့်မည်။ လိုအပ်သောအဆင့်အမှုန်များ၏အချင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောအမှုန်ငယ်များသည်အဆင့်အတန်းဘီးထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီး၊ ဘီးဘီး၏အတွင်းခန်းအတွင်းရှိလေစီးဆင်းမှုနှင့်အတူစီးဆင်းသွားပြီးစုဆောင်းသူမှစုဆောင်းရရှိလိမ့်မည်။ စစ်ထုတ်သည့်အိတ်ကိုသန့်စင်ပြီးနောက်စစ်ထုတ်သည့်လေကိုလေထဲမှထုတ်လွှတ်သည်။
၁။ အမှုန်များသည် ၀.၅-၁၀ မိုက်ခရွန်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ အလွန်မြင့်မားသောလေစီးဆင်းမှုမြန်နှုန်း နှင့်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုအင်အား။
2. Pulverizer အတွင်း၌အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သောပစ္စည်းများကိုရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ယူနီဖောင်းမှုန်မှုန်မှုန်နှင့်သေးငယ်သောအမှုန်အချင်းများဖြင့်အချောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများမှကြမ်းတမ်းသောအမှုန်များကိုစက်ဘီးဖြင့်စွန့်ပစ်နိုင်သည်။
GMP / FDA စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ခြင်း ၃။ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်း၊ ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းသည်ကြိတ်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်မှပစ္စည်းအားမညစ်ညမ်းစေပါ။
၄။ လေစီးဆင်းမှုသည်စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အလွန်အမင်းသန့်ရှင်းသည် တံခါးပိတ် circuit ကိုကြိတ်ခွဲရန်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကျစ်လစ်သောဖွဲ့စည်းပုံ။ ကုန်ကြမ်းမှသည်အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်သည့်အထိ pulverization သည်အချိန်တိုတောင်းသော်လည်းထိရောက်မှုနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုတို့ကိုရရှိစေသည်။
5. ပစ္စည်းကိရိယာများဖွဲ့စည်းပုံရိုးရှင်းသည်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပမြင့်မားစွာပွတ်， သေနေသောထောင့်မရှိ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်
6.Low wear: ကြိတ်ခွဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အမှုန်များ၏သက်ရောက်မှုနှင့်တိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသောကြောင့်မြန်နှုန်းမြင့်အမှုန်များသည်နံရံကိုထိသည်။ ၎င်းသည် Moh's Scale9အောက်ရှိပစ္စည်းများကိုကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
7. သက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် FAT.SAT.DQ.OQ.IQ.PQ.
GMP / FDA စံသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတ်ဒီဇိုင်းများ
နှင့်အတူ Hopper တင်ခြင်း ညစ်ညမ်းထုတ်ကုန်ကိုရှောင်ရှားရန်အဖုံးကိုတံဆိပ်ခတ်။
ထုတ်ကုန်များကိုသန့်ရှင်းစွာထားရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်အဖုံးပါသောမော်တာအားလုံး။ Professional ဒီဇိုင်း။
Pneumatic Pulverizer တွင်လေထုဖိအား၊ ရေနံ၊ ရေနံ၊ ဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာအခြောက်ခံစက်၊ လေစစ်စက်၊ အအေးခံအိပ်ရာနယူ Pulverizer, ဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်, စုဆောင်း, လေ intaker နှင့်အခြားသူများပါဝင်သည်။
စနစ်သည်အသိဉာဏ်ရှိသောထိတွေ့မျက်နှာပြင်ထိန်းချုပ်မှု၊ ဤစနစ်သည်အဆင့်မြင့် PLC + touch screen control mode ကိုအသုံးပြုသည်။ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်သည်ဤစနစ်၏လည်ပတ်မှု terminal ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤစနစ်၏မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုသေချာစေရန်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ရှိသော့အားလုံး၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိကျစွာဆုပ်ကိုင်ရန်။
→D90 <5.56um ဖြစ်ရန် 60Mesh မြေမှ MEFENAMIC ACID ကုန်ကြမ်း
→D90 <6um ဖြစ်ရန် 60Mesh မြေပြင်မှ ECONAZOLE NITRATE ကုန်ကြမ်း
→70 Mesh မြေမှ MANGO Powder ကုန်ကြမ်းအား D90 <10um (သို့)အပူအထိခိုက်မခံသောအစားအစာအတွက်သင့်တော်သည်။)
→လက်ဖက်ခြောက် D90 <10um ဖြစ် 50Mesh မြေပြင်ကနေကုန်ကြမ်း
နောက်တစ်ခု: ဂျက်စက်စက်ရုံ WP စနစ် - Agrochemical Field သို့လျှောက်ထားပါ